Izizathu ezi-3 zokuQeshisa iFR | Martech Zone
Izizathu ezi-3 zokuQeshisa iFR
NgoMvulo, Septemba 21, 2009 NgoLwesithathu, nge-29 kaJanuwari 2014 UChris Lucas
Kwindima yam eIFomstack , I umakhi weefom online, Omnye wemisebenzi yam kukunyusa ubudlelwane phakathi koluntu (i-PR) kwaye ngakumbi ukugubungela imithombo yeendaba, eqhuba ukubhengeza kunye nokuqhuba ukuthengisa.
Ukuba namava kokubini kwiarhente nakwicala labathengi ndiyaqonda ukuba yintoni a inkampani elungileyo yoBudlelwane noLuntu ungenza umbutho. Nazi izizathu ezithathu, kumava am, kutheni amashishini, kwaye ngakumbi amashishini amancinci, kufuneka aqeshe iarhente ye-PR engaphandle.
Awunalo ixesha lokwenza PR: I-PR ayisiyo spigot onokuthi uvule ucime. Njengayo yonke imisebenzi yokuthengisa, ukungqinelana, ubuchule, kunye nokulinganisa i-PR yinto ekufuneka icwangciselwe ukwenziwa ixesha elide. Njengokuba awukwazi ukuvula i-SEO, i-PR yinto eya isomelela ngakumbi njengoko ubeka umgudu kuyo.
Ukuphucula uLeunch: Uninzi lwamashishini luyayiqonda indlela ekubaluleke ngayo ukuvelisa imveliso okanye inkonzo entsha kwimpumelelo yeshishini lakho. I-PR ingaphezulu kokubhala nje ukukhutshwa kweendaba kunye nokubeka ngaphezulu kwenkonzo yocingo. Ukuba neqabane elinokwandisa ubudlelwane beendaba, imidiya yoluntu, iminyhadala, amathuba amabhaso kunye neminye imisebenzi enxulumene ne-PR ngokudibeneyo kunye nokukhululwa okukhulu kunokukunika umlenze njengoko usungula imveliso yakho. Kodwa khumbula nje, njengoko benditshilo kwinqaku le-1. PR ayisiyiyo into yokuvula nokucima. qhubeka nawo onke amandla kunye nomfutho owakhileyo. Eyona nto imbi inkampani enokuyenza kukuqalisa imveliso enkulu, ibe ne-PR enkulu, kwaye iphele ngaphandle kokunyusa oko wena kunye nearhente yakho ukuchithe iinyanga uphuhlisa.
Ukuhlaziya imveliso okanye inkonzo: Ngamanye amaxesha nezona ndlu zingcono ze-PR zingaphuma ngaphandle kwezimvo ezilungileyo. Njengakwi-re-brand okanye iwebhusayithi eyenze kwakhona iarhente yangaphandle yokuvuselela i-PR yakho inokuhlawula izabelo ezinkulu. Iiarhente ezilungileyo ze-PR ziyayazi indlela yokujonga imveliso, inkonzo, okanye inkampani kwaye zibone into entsha- into ebhadlileyo. Into ocinga ukuba ifile okanye idiniwe ingasiwa ngokukhawuleza kwintengiso entsha okanye kwindawo entsha kwaye ufumane imilenze ngokukhawuleza. Sebenzisa inkampani ye-PR enokucofa ngokukhawuleza abafowunelwa kunye nokuvavanya izimvo ezintsha inokuvela ebomini imveliso ebunayo okanye ishishini. Khumbula nangona, eyona PR ilungileyo ayinakuvuselela imveliso efayo, qiniseka ukuba ikhona into apho kwaye unyaniseke kwiarhente yakho malunga nempumelelo yangaphambili kunye nokusilela ukuze babonelele ngesicwangciso esifanelekileyo.
Kwaye njengebhonasi nasi esinye isizathu sokuqesha iarhente yangaphandle.
4. UkwiNtengiso Enabantu abaninziAmashishini amancinci azama ukukhuphisana kwiimarike ezinkulu, ezimiselweyo, okanye ezixineneyo anokubona izibonelelo ezilungileyo zokuqesha iarhente yePR engaphandle. Iarhente elungileyo iya kuba nakho ukwenza isicwangciso ijolise kumandla enkampani kunye nokwahlulahlula okukuko okubalaseleyo. Amaxesha amaninzi iarhente inokukunceda ungene ngengxolo kwaye ufikelele kwintengiso oyifunayo ngokukhawuleza.
Ayizizo kuphela izizathu zokuba kutheni umbutho kufuneka uqeshe iarhente ye-PR kodwa ezi zezinye zezizathu endizibonileyo kumxhasi nakwimbono yearhente yokuqesha ngaphandle koncedo lwePR.
tags: yenyusaprEyobudlelwane boluntu
Ukudibanisa amaqhosha eRetweet kwiBhlog yakho yeWordPress
I-Old Marketer xa ithelekiswa neMarketer eNtsha. Ungubani?
Sep 22, 2009 kwi-2: 20 AM
Iifemu ze-PR ziyamangalisa. Kodwa kuya kufuneka uqonde i-PR ngaphambi kokulandela la maqela.
Jonga eli nqaku: http://www.paulgraham.com/submarine.html
Bukela le vidiyo imnandi:
Onke amanqaku amahle. Uninzi lwamashishini amancinci awanamali yokwenza oku. Kodwa njengokuba ungentla,
iinzame kufuneka zingaguquguquki, zicwangciswe ngobuchule, kwaye zilinganiswe.
Kukwanjalo ngentengiso. Ndibona amashishini amancinci ekwenza izihlandlo ezimbalwa kwaye ekhalaza ukuba intengiso ayisebenzi.
Ukuba ishishini likhetha ukuzenzela ngokwalo, isitshixo ayicimi i-spigot. Kanye njengokuba ucoca iikhaphethi zakho yonke imihla, utshayela izitalato eziphambi kwivenkile yakho, le yinto efuna ingqalelo eqhubekayo.
Okt 28, 2009 ngexesha 2:33 AM
Eyona yeyona mali ilungileyo unokuyisebenzisa ukuze uzimisele malunga nentengiso yakho. Ungabhabha ujikeleze ukulandela amathuba ngalo lonke ixesha, kodwa ngokubanzi awunawo uhlahlo-lwabiwo mali lokuwagubungela onke ngokufanelekileyo. Fumana amandla akho kwaye ufumane iingcebiso ezifanelekileyo kwaye wakhe ukusuka apho. Inqaku elilungileyo
IChim PR eQinisekileyo
Ngomhla wama-20 ku-Disemba 2011 ngo-12: 44 PM
Unamanqaku amahle apha-iposti enkulu!
Jan 10, 2012 kwi-8: 13 AM
Ndicinga ukuba ndingavumelana nazo zonke ezi Chris. Esinye isizathu kukuxelelwa, 'hayi' xa unoluvo olubi. Ukuba ubuchwephesha bezobuchwephesha be-PR uzimele ngokwaneleyo uya kuba nakho ukuthetha xa ucinga ukuba enye yeembono zakho ayizukusebenza kwaye kufanele ukuba ube nesibindi sokukuxelela.
Ndicinga ukuba iya ngaphandle kokuthetha ukuba kufuneka bayile ngokwaneleyo ukuba beze nezimvo ngokwabo!
Oktobha 5, 2017 ngo-2: 23 PM
Kuyathakazelisa ukufunda ukuba xa kufikwa kwishishini elifuna ukuqesha inkampani yobudlelwane noluntu ukuba kukho izibonelelo ezinokuthi zivele kubo besebenzisa enye. Ndiyayithanda indlela okhankanye ngayo ukuba oku kuya kubanceda ukuba bandise ukwazisa kweshishini labo okanye nayiphi na imveliso entsha abafuna ukuyithengisa. Le yinto ekufuneka beyijongile ukuze babenakho ukuba nabathile bokusebenza namajelo eendaba ngazo zonke iindlela.